Snn Nepal कति करोडमा बिक्रि भयो जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको इमान ? – Snn Nepal
कति करोडमा बिक्रि भयो जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको इमान ?
पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्ना पार्टीको तर्फबाट गण्डकी सभासद बनेका कृष्ण थापा ‘बिकेको’ ठोकुवा गरेका गर्नुभएको छ । पार्टीको निर्देशन लत्याउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन थापाले अस्वीकार गरेसँगै केसीको सो प्रतिक्रिया आएको हो ।
‘२०५१ सालदेखि हामीले,राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा भाग लियो, कुनैपनि सांसदले अहिलेजस्तो नालयक चरित्र देखाएकै थिएनन्’, उहाँले भन्नुभयो ‘ यिनीहरुको हविगत थाहा भयो, बिक्री भए । निहुँ पारेका छन्, तलतल जिल्लामा, गाउँमा जनताले मानेका छैनन् रे, त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ रु’ उहाँले पार्टीको निर्देशन नमान्नेहरुलाई कारबाही गरिने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
तर गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका कार्यकताले भने अध्यक्ष केसी नै विकेको आरोप लगाएका छन् । उहाँ नविकेको भए किन यसरी एउटा पार्टीको वफादर कार्यकतालाई आरोप लगाउनु भयो, एक जनमोर्चाका कार्यकताले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अध्यक्ष केसी नै करोडौ पैशा लिएर कांग्रेसलाई सहयोग गर्न प्रदेश सभासद थापालाई जोडबल गर्नुभएको छ । नभए यस्तो तथ्यहिन आरोप उहाले थापा माथि किन लगाउनुभयो रु उहाँ आफै विकेको भएर यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो, यसरी मरिहत्य गर्नुमा केहि न केही पक्कै छ एक जनमोर्चाका कार्यकताले गुनासो ब्यक्त गरे ।
बाग्लुङमा कांग्रेसलाई सबै भन्दा ठूलो दुस्मन मान्ने चुनाव पनि एमाले सङ्ग मिलेर लड्ने तर अहिले कांग्रेस सङ्ग मिलेर जाउँ भन्दा पक्कै पनि अध्यक्ष केसीले पैशानै खायर यसरी दवाव दिएको कार्यकर्ताको आरोप छ । सांसद थापाले भने कारवाही भोग्ने, तर कांग्रेसको पक्षमा नउभिने बताउनुभएको छ । ८ वर्ष जनमोर्चा बागलुङ जिल्ला कमिटीको कार्यालय सचिव भएर काम गरेका थापाले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । गत चैत २६ गते बुटवलमा भएको महाभिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित थापा कांग्रेसले दिएको दुःख र स्थानीय जनताको दबाबका कारण यस्तो निर्णयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।